Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Waa maxay MVP iyo Sida Loo Codsado Naqshadda Qalabka
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay MVP - Waxsoosaarka ugu Yar ee Suurtogalka ah - waxaana laga yaabaa inaad la xiriirto softiweer. Dhab ahaantii, fikradani waxay khuseysaa qalabka sidoo kale. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa MVP waxaadna ogaan doontaa sida saxda ah ee aad ugu adeegsan karto naqshadeynta alaabta elektaroonigga ah.
Mid ayaa yareyn kara kharashyada iyo waqtiga naqshadeynta oo abuuri kara badeecada leh astaamaha ugu yar.
Isticmaalka mabda'a MVP waxay heli doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dookhyada macaamiisha.
MVP waa badeecad lagu abuuray dadaal ugu yar.
Way iska caddahay in naqshadeynta iyo soo -saaridda alaab, ama software ama hardware, ay u baahan tahay dadaal iyo kharash. Xaaladda marka alaabtu cusub tahay ama aadan hubin aragtida macaamiisha ee ku saabsan, waxaad yareyn kartaa kharashaadka iyo waqtiga naqshadeynta oo aad abuuri kartaa alaabta leh astaamaha ugu yar. Dabcan, abuurista badeecad waxaad u qaadan kartaa oo keliya waxa ay macaamiishaadu rabaan oo ay diyaar u yihiin inay iska bixiyaan. Sababtaas awgeed, waxaad adeegsan kartaa mabda'a MVP oo aad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dookhyada macaamiisha. Markaad sidaas samayso, waxaad ka soo ururin doontaa jawaab celin macaamiishaada hore. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad horumariso badeecadaada mustaqbalka adoo ku tiirsan dabeecadaha macaamiisha. Markaa, MVP waa badeecad lagu abuuray qaddarka ugu yar ee dadaalka.
Sidee loo adeegsadaa MVP qalabka?
Asal ahaan, adeegsiga fikraddan kuma kala duwana naqshadda qalabka. Marka hore, waa inaad go'aamisaa astaamaha ugu habboon ee alaabtaada. Maskaxda ku hay in sifo kastaa ay kor u qaadi doonto kakanaanta badeecadaada, sidaas awgeedna, kharashyada iyo dadaallada naqshadeynta. Si looga fogaado in lagu daro astaamo aad u badan, noqo mid xulasho leh. Bilowga bilowga ah, waxaad ku qori kartaa sifo kasta oo suuragal u ah badeecadaada, ku kala sarrayso kakan iyo kharash iyo kala mudnaan siinta tixgelinta baahida macaamiisha.
Marka xigta, go'aaminta qiimaha iyo waqtiga horumarinta astaamo kasta iyo, ugu dambayn, qiimaha alaabtaada. Soo hel dheelitir u dhexeeya kharashka wax -soo -saarka iyo qiimaha badeecadaada. Waxaa lagugula talinayaa inaad diirada saarto sifooyinkaas aad rumeysan tahay inay ku dari doonaan xadka faa'idada ugu badan badeecadaada.
Ka dib markaad qiimeyso astaamaha, ka saar kuwa leh kakanaanta iyo qiimaha sare ee liiskaaga. Tilmaamo kakan oo qaali ah looma qorshayn karo marka la eego MVP. Taa beddelkeeda, aqoonsado sifooyinka wax-ku-oolka leh ee leh mudnaanta macaamilka ee sarreeya. MVP waa inay ku jirtaa sifooyin fudud oo jaban.
Marka xigta, sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah suuqa uga hel badeecada ugu wax -ku -oolsan suuqa. Fikradda asaasiga ah ee MVP kuma koobna oo kaliya kharashyada ugu yar laakiin sidoo kale waqtiga ugu yar ee lagu kharash gareeyo naqshadeynta badeecadda bilowga ah. Markaa, waqtigaaga badbaadi oo sii wad inaad barato baahiyaha macaamiisha. Waxaad ka soo ururin kartaa ra'yi -celinta macaamiisha adiga oo adeegsanaya iibinta iyo xogta iibka ee kala duwan. Xogtan waxaa loo adeegsan doonaa nooca mustaqbalka ee badeecadaada oo dabooli doonta baahida macmiilka. Isla mar ahaantaana, adoo adeegsanaya warcelinta waxaad go'aansan kartaa inaad soo saarto badeeco ka duwan. Maskaxda ku hay in qaar ka mid ah astaamaha aan loo baahnayn ee MVP -gaaga laga saari doono noocyada cusub ee alaabtaada.
Markaa, MVP waxay u oggolaanaysaa in waqti yar iyo kharash yar lagu bixiyo naqshadeynta badeecada, uruurinta warcelin laga helo macaamiisha dhabta ah iyo hagaajinta alaabtaada si loo helo jawaab celinta. Akhri maqaalo dheeraad ah on design elektaroonik ah.